Bit By Bit - Idebe ihe omume - 2.5 Mmechi
Big data bụ n'ebe nile, ma na-eji ya na ụdị ndị ọzọ nke observational data na-elekọta mmadụ nnyocha siri ike. Na m ahụmahụ e nwere ihe dị ka a dịghị free nri ehihie onwunwe maka nnyocha: ma ọ bụrụ na ị na-adịghị etinye na a ọtụtụ ọrụ obon data, mgbe ahụ, ị na-eleghị anya aga nwere ka a na ọtụtụ ọrụ ị na-atụle gị data ma ọ bụ na-eche echiche banyere ihe dị na-akpali ajụjụ ịjụ nke data. Dabere na echiche n'isiokwu a, m na-eche na e nwere ụzọ atọ bụ isi na nnukwu data isi mmalite ga-kasị baa uru na-elekọta mmadụ research:
empirically adjudicating n'etiti mpi usoro iwu amụma. Ihe atụ nke ụdị ọrụ agụnye Farber (2015) (New York tagzi ọkwọ ụgbọala) na King, Pan, and Roberts (2013) (nnyocha na China)
mma na-elekọta mmadụ mmesho maka iwu site nowcasting. Otu ihe atụ nke ụdị ọrụ bụ Ginsberg et al. (2009) (Google Flu Trends).
estimating causal mmetụta na eke nwere na kenha. Ihe atụ nke ụdị ọrụ. Mas and Moretti (2009) (nyoba anya mmetụta na arụpụtaghị) na Einav et al. (2015) (mmetụta nke amalite price na auctions na eBay).
Ọtụtụ ajụjụ ndị dị mkpa na-elekọta mmadụ research nwere ike igosipụta dị ka otu n'ime ihe atọ ndị a. Otú ọ dị, ihe ndị a ọ na-adịkarị achọ na-eme nnyocha iji mee ka a otutu nke data. Gịnị na-eme Farber (2015) na-akpali bụ usoro iwu mkpali maka mmesho. A usoro iwu akpali abịa site n'èzí data. N'ihi ya, n'ihi na ndị na-ezi ihe na-arịọ ụdị ụfọdụ nke research ajụjụ, nnukwu data isi mmalite pụrụ ịbụ mụọ ọmụmụ nke ukwuu.
N'ikpeazụ, kama tiori-chụpụrụ ahụrụ anya research (nke siworo-elekwasị anya na isiokwu a), anyị nwere ike tụgharịa na edemede na ike empirically-chụpụrụ nchepụta. Ya bụ, site na ịkpachara anya ìgwè ahụrụ anya eziokwu, ihe nakawa etu esi, na egwuregwu mgbagwoju anya, anyị nwere ike iru ọhụrụ chepụtara.
Nke a ọzọ, data-mbụ obibia ozizi abụghị ihe ọhụrụ, ọ nọ na kasị forcefully articulated site Glaser and Strauss (1967) na ha oku maka ebe tiori. Nke a data-mbụ obibia Otú ọ dị, adịghị enye echiche na "ọgwụgwụ Ozizi," dị ka e ekwu site ukwuu nke oru ndi gburugburu nchọpụta na dijitalụ afọ (Anderson 2008) . Kama nke ahụ, dị ka data gburugburu ebe obibi mgbanwe, anyị aghaghị ịtụ anya a re-adịzi na mmekọrịta dị n'etiti ozizi na data. N'ụwa ebe data collection bụ oké ọnụ, ọ na-eme ka uche naanị anakọta data na chepụtara na-atụ aro ga-abụ ihe kasị bara uru. Ma, n'ụwa ebe nnukwu ichekwa data na-ama maka free, ya-eme ka uche na-agbalị a data-mbụ obibia (Goldberg 2015) .
Dị ka m na-egosi n'isiokwu a, na-eme nnyocha nwere ike ịmụta ọtụtụ site na-ele ndị mmadụ. Nke ọzọ atọ isi, m ga-akọwa otú anyị nwere ike ịmụta na dị iche iche ihe ma ọ bụrụ na anyị na-ịkwa akwa anyị data collection na-emekọ ihe ndị ọzọ kpọmkwem site na-ajụ ha ajụjụ (Isi nke 3), na-agba ọsọ nwere (Chapter 4), na ọbụna ndị metụtara ha na nnyocha usoro ozugbo (Chapter 5).